DEG DEG: Kooxda Manchester City oo maanta dhammaystiraysa saxiixa Jack Grealish – Gool FM
(Manchester) 04 Agoosto 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa inay maanta dhammaystiri doonto saxiixa Jack Grealish oo ay kula wareegeyso 100 milyan oo gini.
Kabtanka Aston Villa ayaa Kooxda Manchester City ugu biiraya heshiis rikoorka Britain ah.
Wargeyska Sportsmail ayaa shaaca ka qaaday Maarso in Man City ay tahay kooxda ugu cad-cad ee la saxiixanaysa xiddigan khadka dhexe ee Villa, waxaana wadahadalladu ay bilowdeen todobaadkii la soo dhaafay, waxaana ay Jimcihii la soo dhaafay ka gudbisay City dalab ku kacayay 100 milyan oo gini.
Kooxda xafidanaysa horyaalka Premier League ee uu hoggaamiyo Tababare Pep Guardiola ayaa la warinayaa in saacadaha soo aaddan ee maanta illaa caawa ay ku dhawaaqi doonto saxiixa Jack Grealish.
Grealish ayaa dib ugu soo laabtay Tababarka Villa Isniintii kaddib fasax uu ku qaatay Mykonos iyo Dubrovnik, waxaana uu haatan isku diyaarinayo inuu tallaabo kale u qaado xirfaddiisa ciyaareed oo uu ka mid noqdo kooxda ka dhisan garoonka Etihad.
Dhan kale Kooxda Villa ayaa dib u dhis ku sameynaysa safkeeda si ay tartan u geliso lixda kooxood ee ugu waa weyn horyaalka Premier League, waxaana ay mardhow dhammaystirtay saxiixa xiddigii garabka uga ciyaari jiray Bayer Leverkusen ee Leon Bailey, kaasoo ay kula soo wareegeen 30 milyan oo gini.
Sidoo kale waxa ay doonayaan xiddiga Kooxda Southampton ee James Ward-Prowse, midka Chelsea ee Tammy Abraham, Todd Cantwell oo ka tirsan Norwich City iyo Daafaca Manchester United ee Axel Tuanzebe.
Waxaa laga yaabaa in saacadaha soo aaddan ay labada kooxood ee Manchester City iyo Aston Villa ku dhawaaqaan in Grealish uu u dhaqaaqay garoonka Etihad.